Misoro Yenhau Dzedu Dzanhasi, Muvhuro Kukadzi 24, 2020.
Vechidiki vaviri veMDC, VaMakomborero Haruzivishe naVaAllan Moyo, avo vakasungwa svondo rapera vachipomerwa mhosva yekuratidzira zviri kunze kwemutemo, vanopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso inoita chiuru chemadhora emari yemunyika.
Musangano wechitanhatu wekutarisa nyaya dzebudiriro pasingakanganiswi zviwanikwa, weSixth Session of the Regional Forum on Sustainable Development, unotanga nhasi kuVictoria Falls.
Komisheni inorwisana nehuwori munyika, yeZimbabwe Anti-Corruption Commission, ZACC, inoti iri kutarisira kunge yave nemahofisi anoshanda mumatunhu matanhatu emunyika mukupera kwegore rino senzira yekuedza kurerutsa mashandiro ayo.
Vatambi venhabvu vemunyika vane mukurumbira vari munyika dzakasiyanasiyana vanozvipira kutambira chikwata chemaWarriors mumitambo yacho yakakosha iriko mwedzi unoya pachatamba maWarriors neAlgeria mumakwikwi eAfrica Cup of Nations.
Dambudziko rekushaiwa mbereko rogadziriswa zvichitevera kubatsirwa kwemhuri dzinodarika makumi matanhatu dzaive nedambudziko iri neimwe kiriniki iri muHarare.
Muchirongwa chedu cheLivetalk na8pm, nhasi tiri kutarisa nezvedambudziko remafuta edzimotokari, iro rinonzi riri kutowedzera kunyange hazvo pave nemamwe magaraji ave kutengesa mafuta nemadhora ekuAmerica.